Nhau - Ungagadzirise sei yako masitepisi?
1 / Nyatsogadzirisa matambo
Kazhinji tsika yedu yekutuka inogona kuve chinhu chimwe chete chakamira pakati pako neakanaka, echinyakare aesthetic. Chinyakare Balusters (kana chokurukisa) uye handrails hazvikurudzire - zvinongoshanda. Matinji edu anogona kushanda pamwe nekuwedzera. Nekudaro, kana yako masitepisi isiri yechinyakare, funga kuisimudzira kuti ive sisitimu inokodzera maitiro ako uye hunhu maererano.
2 / Simudzira maBalsters (kana shinda)
Tsiva mabalusters (kana chokurukisa) nematare esimbi akarukwa ayo anotaura nehunhu hwako. Iyo simbi maitiro iri kukura uye, sevakuru-vekupedzisira vagadziri vanoda zvakawanda uye zvakagadziridzwa dhizaini, zvakare ako sarudzo mune yakarukwa simbi musika ari kukura. Izvi zvinhu zvinogona kushandurwa kuita makakombama, maberere uye maumbirwo ejometri kugadzira akasiyana uye anotamba zvigadzirwa. Iwe unogona zvakare kuiwana mune echinyakare kana mashoma dhizaini uye zvichingodaro. Chero chipi chinokukodzera, chingochinjanisa maokisheni ako echinyakare esimbi yesimbi uye chengeta ruoko rwehuni kuti ubatanidze zvetsika nezvino.
3 / Tamba ma risers
Kana isu tichitarisa pamatanho takatwasuka-kumusoro, iwo anomuka anotora anonyanya kuona nzvimbo. Uye zviripachena kuti apa ndipo paunogona kuwana mukana wakanyanya nebhajeti repasi. Ipa yako masitepisi hombe pop yehunhu nependi yakajeka kana Wallpaper - kana sanganisa zvese nekuzvichinjanisa. Tsvaga yakatetepa, yakataridzika kutarisa nependi chena kana yakashongedzwa, shoma dhizaini. Kune madhora mashoma se10, unogona kunyange kutenga peel-uye-tsvimbo decals mumarudzi akasiyana siyana uye dhizaini yekusimudzira masitepisi ako mune isingasviki awa.
4 / Bvisa mumhanyi
Mumhanyi ndeimwe yesarudzo dzakareruka uye dzakakwirira-dzekugadzirisa masitepisi ako, izvo hazvingogadziri masitepisi ako kuti ave akachengeteka, asiwo zvinowedzera kufarira kutaridzika nehunhu. Mumhanyi anonyatsosiyanisa masitepisi ako anogona kuvapa kutaridzika kwemazuva ano munguva pfupi. Mumhanyi uyo anoratidzira mareti maitiro uye akasvibira mavara anogona kuwedzera runako uye hupfumi. Ruvara rwemusango, rwakaita sepingi inopenya kana yeMediterranean bhuruu, inogona kushandura kutaridzika uye kunzwa kwenzvimbo yese yakatenderedza uye kuratidza kuti chako chimiro chei.
5 / Tamba nepende
Zvese zvinogoneka nependi. Dhinda mabharusters ako muvara rwekusimudzira wawakasarudzira nzvimbo yako, senge sunflower yero kuti uenzane nechidimbu cheunyanzvi. Gadzira hudzamu nekupenda iwo ekunyomba uye mabharusi zvishoma zvakafanana shades, senge terra cotta uye inodziya, yakadzika brown kuti ubatsire yako yevhu shongedzo. Nezve yakashinga color scheme, funga muraraungu kana ombre kutaridzika uye zvichingodaro.